မားကက်တင်းအကြောင်း သိကောင်းစရာ ၂ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » မားကက်တင်းအကြောင်း သိကောင်းစရာ ၂
မားကက်တင်းအကြောင်း သိကောင်းစရာ ၂
Posted by manawphyulay on Dec 11, 2010 in News |4comments
အပိုင်း ၁ မှာ ဈေးကွက်ဖွင့်ခြင်းနဲ့ သုတေသန အကြောင်းကိုတော့ သင်တို့ သိရှိပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အခု ဆက်လက်ပြီး ဈေးကွက်မှာ အောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ အပိုင်း ၄ ပိုင်းမှ နောက်ထပ်တစ်ချက်ကို ကျွန်မ ပြောချင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ဗျူဟာ အခင်းအကျင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကွက်ဖွင့် အခင်းအကျင်းဆိုတာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နဲ့ ဦးတည်ရည်ရွယ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ချမှတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဘာအကြောင်းအရာတွေ စဉ်းစားသင့်လဲဆိုတာ ကြည့်ရအောင်။
– အခုကိုယ့်လုပ်ငန်းက ဘယ်နေရာ ဘယ်အဆင့်ရောက်နေသလဲ?
– ကိုယ်တို့ ဘယ်နေရာ ဘယ်အဆင့်ကို ရောက်ချင်တာလဲ?
– ဘာကြောင့် အဲဒီနေရာ အဲဒီအဆင့်ကို ရောက်ချင်ရတာလဲ?
– ဒါဆိုရင် ကိုယ် ဘာတွေပြီးစီးအောင် လုပ်ရမှာလဲ ?
ဈေးကွက်ဗျူဟာ ချတော့မယ်ဆိုရင် အပိုင်း ၁ မှာ ပြောခဲ့တဲ့ ဈေးကွက်သုတေသနက အဲဒီမွေးခွန်းတွေကို အဖြေပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗျူဟာအခင်းအကျင် ချလိုက်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်သွားမယ့်နေရာဆီကို ဦးတည်လိုက်တာပဲ။ သွားမယ့်အရပ် နေရာရှိပြီဆိုရင် နောက်ထပ် မေးခွန်းတစ်ခုကို အဖြေပေးရလိမ့်မယ်။ ဘယ်လိုဘယ်ပုံနဲ့ အဲဒီနေရာကို ရောက်နိုင်မှာလဲ ဆိုတဲ့ အရာပါပဲ။
ကဲ ဒီတော့ အချက် သုံးဖြစ်တဲ့ အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းကို ဆက်လက်ကြည့်ရအောင်။
ဈေးကွက်ဖွင့် အစီအစဉ် ရေးဆွဲတာဟာ ဘယ်လိုဘယ်ပုံနဲ့ အဲဒီနေရာ ရောက်နိုင်မှာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေကြားပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းပြောရရင်တော့ သော့ချက်ကျတဲ့ အချက်တွေကို အချိုးအဆ မှန်ကန်စွာ ရောစပ်ဖို့ စီစဉ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ P လေးလုံးကို ဆောင်ထားဖို့လည်း မမေ့သင့်ဘူးလို့ ကျွန်မ ပြောပါရစေ။ ပီလေးလုံးက ဘာတွေလဲ။ ဈေးကွက်အကြောင်း ပြောတာ ဘယ်က ပီလေးလုံးက ပါလာရပြန်တာလဲလို့လည်း မအောင်းမေ့လိုက်ပါနဲ့။
၁။ Product ဆိုတဲ့ ထုတ်ကုန် (အဲဒီထဲမှာ ၀န်ဆောင်မှုလည်းပါတယ်။)
၂။ Place ဆိုတဲ့ နေရာဒေသ (ဖြန့်ဖြူးတာ၊ လွယ်ကူအဆင်ပြေစွာ ၀ယ်ယူရရှိနိုင်တာ။)
၃။ Promotion ဆိုတဲ့ ထုတ်ကုန်တွေ၊ ၀န်ဆောင်မှုတွေကို စားသုံးသူတွေထဲ ပို့ဆောင်ပေးတဲ့နည်းလမ်း။
၄။ Price ဆိုတဲ့ ဈေးနှုန်း (ဘာအတွက် ဘယ်လောက်တန်ဖိုး သတ်မှတ်တောင်းခံမှာလဲ။) ပီလေးလုံးဆိုတာ ကျွန်မ ပြောချင်တာတွေပါပဲ။
ဘယ်ဆိုင် ဘယ်နေရာမှာ ၀ယ်ရတာနိုင်တာလဲ?
ဒီ (ရောင်းကုန်ပစ္စည်း)အကြောင်းကို လူတွေသိအောင် ဘယ်လိုပြောပြသလဲ?
ဒါတွေက ကျွန်မလို လူပိန်းတစ်ယောက်တောင် သိနိုင်တဲ့ အချက်တွေဆိုတော့ သင်တို့အနေနဲ့တော့ ပြောစရာလိုမယ် မထင်ပါဘူး။ ခုနောက်ပိုင်း မားကက်တင်းက အပြင်အပတွေတင် မဟုတ်တော့ပဲ အွန်လိုင်းကနေပါ အွန်လိုင်းမားကက်တင်းဆိုပြီး ရေပန်းစားလာတာဆိုရင်ဖြင့် အရင့်အရင်တွေထက် ပိုပြီး လုပ်ငန်းတိုးတက် အောင်မြင် မြန်ဆန်ဖို့နည်းလမ်းကောင်းတွေပဲ မဟုတ်ပါလား။
ဘယ်နေရာ ကြည့်ကြည့် လက်ကမ်းစာစောင်တွေ၊ စတေကာတွေ၊ ပရိုမိုးရှင်း ကမ်းတာတွေ ပိုများလာသလို ပရိုမိုးရှင်းလုပ်တာတွေလည်း သီတင်းကျွတ်ရင်လည်း သီတင်းကျွတ်မို့ အဲ သီတင်းကျွတ်ကျော်တော့ တန်ဆောင်တိုင် ပရိုမိုးရှင်းလာပြန်ရော နောက် ပြီးသွားပြန်တော့ ဆောင်းတွင်းကာလ လုပ်ပြန်သေးတယ်လေ။ ၁၂ လမှာ တစ်လ တစ်မျိုး မရိုးအောင် ဈေးကွက်ထိုးဖောက်လာကြတာ အမြင်ကျယ်ပြီး နည်းလမ်းကောင်းတဲ့သူတွေက ပိုမိုအောင်မြင်လာတာပဲ မဟုတ်လား။ ကျွန်မကတော့ ပြောသာ ပြောရတာပါရှင်။ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ၀န်ထမ်းလစာ(ကားခစရိတ်လောက်သာသာ) လေးနဲ့ တစ်လ တစ်လ အလျင်မီအောင် ရုန်းကန်နေရတော့ ပရိုမိုးရှင်းလုပ်တဲ့ ပွဲတိုင်း အပြင်ကသာ ငေးကြည့်ခွင့် လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူ တစ်ဦးပါပဲလေ။ ပီလေးလုံးအကြောင်းကို အပိုင်း ၃ မှာ ဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။
အဲဒီ marketing mix ကိုဘယ်သူထွင်ခဲ့တာလဲဗျ။
marketing mix အကြောင်းကို အကျယ်ရှင်းရင်
product life cycle လေးအကြောင်းလည်းလုပ်ပါဦး
ဆိုတဲ့မေးခွန်းအတွက် ဖြေရရင် ဘယ်သူထွင်ခဲ့သလဲ ဆိုတာကိုအသေအချာမသိပေမယ့်
ဒါပေမယ့် အခုလက်ရှိအနေအထားမှာတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ကုန်စည်ဈေးကွက် က
ခေတ်ဟောင်း(ရှေးရိုးမိရိုးဖလာအတိုင်းလက်တွေ့ လုပ်ဆောင်ကြသူများ)နဲ့ ခေတ်သစ်(အနောက်နိုင်ငံများမှ ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးဆိုင်ရာသီအိုရီများကို ဖတ်ပြီးစမ်းသပ်လုပ်ဆောင်နေကြသူများ)ရဲ့အားပြိုင်ပွဲလို့လဲမြင်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းကို အားတဲ့နေ့ ပိုစ်တပုဒ်သတ်သတ်တင်ပါအုံးမယ်။